Sida Loo Dejiyo Channelkaaga Youtube loona Burburiyo! | Martech Zone
Sida Loo Dejiyo Channelkaaga Youtube loona Burburiyo!
Jimco, Juun 17, 2016 Talaado, Juun 13, 2017 Douglas Karr
Xitaa haddii aad wax ku daabacayso kanaallada kale ee fiidiyowga sida vimeo ama Wistia, weli waa dhaqan weyn in la daabaco iyo kor u qaad ganacsigaaga 'Youtube joogitaanka Youtube waxay kusii socotaa hogaankeeda mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn iyadoo dadka isticmaala ay baaraan iibsigooda soo socda ama ay ogaadaan sida wax loogu sameeyo internetka.
Youtube wuxuu ahaan jirey degel wadaag muuqaal fiidiyoow ah 2006, dadku waxay wadaagi jireen bisadooda iyo fiidiyowyada guryaha lagu qoslo. Toban sano ka dib, sameynta fiidiyowyada Youtube waa shaqo waqti-buuxa ah oo loogu talagalay abuurayaal badan. Sidaas aad u badan oo Youtube uusan u aheyn degel websaydh ah, waa warshad leh dad caan ah, shirar sanadle ah, iyo abaalmarinno la muujiyo. WeAreTop10
Waa kuwan qaar ka mid ah tirakoobyada cajiibka ah ee Youtube, oo la cusbooneysiiyay 2016
Gaaritaanka Youtube - #Youtube waxay leedahay in ka badan hal bilyan oo isticmaale - ku dhowaad saddex-meelood meel dhammaan dadka ku nool internetka - maalin walbana dadku waxay ku daawadaan boqolaal milyan oo saacadood Youtube-ka waxayna soo saaraan balaayiin aragtiyo ah.
Gaaritaanka Millenniumka Youtube - Youtube guud ahaan, xitaa #Youtube-ka mobilka wuxuu gaaraa in ka badan 18-34 iyo 18-49 sano jir ka badan shabakadaha fiilooyinka ee Mareykanka.
Youtube Global Gaarsiin - #Youtube waxay ka bilowday noocyo maxalli ah in ka badan 88 dal iyo 76 luqado kala duwan (oo ka kooban 95% dadka ku nool internetka).
Gaaritaanka Youtube Mobile - Marka isticmaaleyaashu ay ku jiraan Youtube, waxay waqti badan ku qaataan kalfadhi kasta daawashada fiidiyowyada. Mobilka, celceliska kulanka daawashada #Youtube hadda waa in kabadan 40 daqiiqo in kabadan kala bar aragtiyada #Youtube waxay ka yimaadaan aaladaha mobilada
Sida Loo Dajiyo Youtube Channel Ganacsi
Macluumaadkani wuxuu kugula socdaa dhammaan xeeladaha muhiimka ah ee lagu go'aaminayo sida aad si guul leh u bartilmaameedsanayso oo aad ula xiriiri karto dhagaystayaashaada, magaca iyo naqshadeynta kanaalkaaga, soo iibso qalab maqal iyo muuqaal leh oo tayo leh, soo saar fiidiyow fiidiyoow ah, dhiirrigeli waxyaabahaas, iyo naftaada ama naftaada ganacsi loo aqoonsan yahay inuu yahay soosaaraha maaddada Youtube.
Deji Channelka Youtube
Samee shaqo cajiib ah oo xitaa waad bilaabi kartaa lacag kaashka jeegaaga Youtube qaarkood! Youtubers-ka guuleysta waxay sameyn karaan inta udhaxeysa toban senti ilaa $ 6 halkii kun ee aragti ah! Tirada kanaallada ka shaqeeya lix tirooyin sanadkii Youtube-ka ayaa ka badan 1,000% sanadkii.
Tags: waxaan nahay 10 sareWearetop10youtubewaxyaabaha ku jira youtubesuuqgeynta youtubeyoutube mobaylhagaajinta youtubetirakoobka youtubexeeladaha youtube
Adeegsiga Warbaahinta Isdhexgalka si aad u Dhiirrigeliso Ballaarintaada B2C
Jun 18, 2016 saacadu markay ahayd 4:30 AM
Dhibco wanaagsan runtii iyo sidaad u sheegtay, magac u bixinta kanaalka si sax ah halka ay bartilmaameedsadayaashu isku xiri karaan waa muhiim. Waxaan hadda bilaabaynaa inaan bilowno Channelkeena Suuqgeynta Dijitaalka ah iyo SEO kanaalka koorsada fiidiyowga ah ee SEO oo aan rajeyneyno inaan si qoto dheer uga fikirno mid kasta oo ka mid ah soo jeedimaha aad halkaan ku dhejisay, in kasta oo ujeeddadayada aasaasiga ah ee kanaalka Youtube / fiidiyowyadu ka yara duwanaan karaan. Waad ku mahadsantahay daabacaadda qoraalkan iyo faahfaahinta.